Kuzara kwovuMwari kunotsanangurwa chikamu 1
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Kuzara kwovuMwari kunotsanangurwa chikamu 1
Kuzara kwovuMwari kunotsanangurwa chikamu 1
Kuzara kwovuMwari: tinofanira kuziva kuti Mwari ndiyani.
1 TIMOTIO 3:16 Hakuna ungaramba kuti chakavanzika chokunamata chikuru kwazvo, chokuti: iye Mwari wakaratidzwa panyama, wakaruramiswa pamweya, wakavonekwa navatumwa, wakaparidzwa pakati pavahedheni, wakatendwa panyika, wakakwidzwa mukubwinya.
Wakaratidzwa. Akazviratidza ari mumuviri weNyama.
Mwari aive kunze kwemuviri weMunhu Jesu here, achiushandisa ari kwakadaro uko, kana kuti aive mukati mawo?
Chakavanzika chikuru chemuTestamente yekare kumaJuda chaive chekuti Mwari aive Mweya wakavanzika waizouya kwavari rimwe remazuva ari mumuviri wemunhu, Mesiah. MaJuda havaifungira kuti Mwari angave Munhu, Jesu.
Chakavanzika chemuTestamente Itsva, chekuti maKristu anonetseka kubvumirana nacho, ndechekuti Murume uyu anokwanisa kuva Mwari. Kuti Jesu ndiye Mwari.
Tsvagiridzo yechokwadi inotanga apo tinoedza kutambanudza chakavanzika chekuzara kwevuMwari.
“Mwari ndiye chakavanzika chatisingakwanisi kunzwisisa” zvingatore muVangeri ane mbiri. Asi izvi zvingatitadzise kuziva kuti Mwari ndiyani here?
Kana tikateerera kumharidzo yemutumwa wechinomwe, ipapo tinofanira kuva tave kugona kubatanidza zvakavanzika toziva kuti Mwari ndiyani.
Kwete “kune zvichapedziswa” sekunge kunzwisisa kunodzivirirwa asi “zvinofanira kupedziswa” zvichireva kuti tingawane chokwadi kana kuti tinokwanisa kukanganisika panyaya iyi nekuda kwemafungiro edu. Hatinganzwisisi chimwe chinhu kunze kwekunge taona mufananidzo wacho wakazara. MaKristu mazhinji anoona Mwari saMwari mumwechete asizve, dzimwe nguva, sevanhu vatatu vakasiyana. Mufananidzo uyu unorasisa uye uchagara uri chakavanzika. Ngatinyatsotarisisei zvakadzama kuti tikwanise kupedzisa chakavanzika ichi.
1 VAKORINTE 13:12 Nokuti zvino tinovona pachivoni-voni, tisingavoni kwazvo; asi nenguva iyo tichaona nezviso zvakatarisana; zvino ndinoziva zvisakakwana, asi nenguva iyo ndichaziva sezvandakazivikanwa neni vo.
Kusaziva kwedu nekurasiswa kwatakadzidza kumashure zvicharamba zviri zvipingaidzo pamukana wedu wekudzidza chokwadi.
JOHANI 4:24 Mwari ndimweya; vanomunamata, vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi.
Mweya hauna chimiro kana mufananidzo.
VAROMA 8:10 Kana Kristu ari mukati menyu, muviri wakafa nokuda kwezvivi, asi Mweya mupenyu nokuda kwekururama.
Mukati memuviri wako mune mweya unova hupenyu hunofamba mutsinga dzeropa zvoita kuti urambe uri mupenyu. Haungaone hupenyu uhu. Saka mweya wagara usingakwanisi kuonekwa nesu.
Saka hatikwanisi kuona Mwari. Ndiye Mweya Mutsvene. Ndiyo tsananguro yedu yakanakisa yatingatsanangure Mwari nayo. “Mutsvene” ndiwo maitiro ake “muMweya” ndiwo magariro ake.
Asi pano taita dambudziko rimwechete hatikwanisi kuona mweya. Mweya hauna chimiro kana mufananidzo. Mweya wako, usina mufananidzo, unofamba uchipinda nemuzvigunwe nemaoko emuviri wako une chimiro. Mweya wako unoita kuti maoko ako ararame. Haungakwanisi kuona mweya wako asi unoziva kuti mweya wako unoshanda mukati mako kukuitisa zvese, kunyangwe kuita kuti hana yako irove uye kuti mapapu ako afeme kana wakarara.
Edza maonero matsva. Mweya usingaonekwe uri mauri ndiwo “baba” muviri wako watinoona ndiwo “mwanakomana” unoteerera chausingaone, mweya ugere mauri. Pashure pazvose, Mweya wako unotonga muviri uye unoukurudzira kuita zvose zvaunoita.
JOHANI 5:37 Naivo Baba, vakandituma, ndivo vakandipupurira vo. Hamuna kutongonzwa inzwi ravo, kana kuona mufananidzo wavo.
JOHANI 1:18 Hakuna munhu wakatongoona Mwari; chero nguva ipi; Mwanakomana wakaberekwa mumwe oga, ari pachifuwa chaBaba, ndiye wakamuzivisa isu.
Hatikwanisi kuona Mweya waMwari.
VAEFESO 4:4 Kune muviri mumwe , nomweya mumwe, sezvamakadanwa vo mutariro imwe yokudanwa kwenyu;
5 Ishe mumwe, nokutenda kumwe, norubapatidzo rumwe.
6 NaMwari mumwe, naBaba vavose, uri pamusoro pavose, unobata navose, uri mukati menyu mese.
Mweya mumwe, naMwari mumwe. Pamusoro pazvose, Mwari ndiMweya.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya.
Saka uyu ndiye Munhu mumwechete.
Nechepakati pakanzi Mwari mumwe. Nei? Ishe zvinoreva tenzi. Mazuva ano vanhu vanoti Vakuru. Izvi zvinoreva kuti Mwari haasi chero munhu watingadzidza, ndiye mukuru anofanira kuteererwa.
Bhaibheri rinokoshesa kuti kuna Mwari mumwechete chete, mukuru mumwechete. Nei izvi zvakadaro?
Nekuti Mwari mukuru hapana umwe akafanana naye pazvese.
Chinhu chakasikwa chatinoona chinogarova nemiganhu yacho uye nemwero wacho saka hachingakwanisi kubata hukuru uhu hahuna mwero kana muganhu. Kana Mweya usina mwero nemuganhu ukazviisa muchisikwa chine mwero nemuganhu, zvino unochizadza zvekupfachukira. Zvekuti hakungavi nenzvimbo yeMweya wechipiri kana wechitatu zvakare.
JEREMIA 23:24 Ko munhu uripo ungavanda panzvimbo dzisingazivikanwi, ini ndikasamuvona here? Ndizvo zvinotaura JEHOVA. Ko ini handizadzi denga nenyika here? Ndizvo zvinotaura JEHOVA.
ISAYA 66:1 Zvanzi naJEHOVA, kudenga ndicho chigaro changu cheushe, nyika ndicho chitsiko chetsoka dzangu; mungandivakira imba yakadiniko? Ndeipiko nzvimbo pandingazorora?
Kana kudenga kungori chigaro chaMwari cheushe chete, zvinoreva kuti Mweya wake wakakura kupinda nekunze kwedenga.
Hukuru hwaMwari haungakwane mudenga zvisinei nekuti denga rakakura sei.
I MADZIMAMBO 8:27 Ko mukati Mwari ungagara panyika here? Tarirai denga nokudenga-denga hazvingamuringani; ndoda imba ino yandakavaka!
Saka hatina mufananidzo wehukuru hwaMwari, hwatisingaoni.
Njere dzedu duku hadzingagoni kuita mufananidzo wehukuru HwaMwari. Hukuru hwaMwari chinhu chatisingakwanisi kunzwisisa isu vanhu venyama sezvo munyika yedu yatigere hamuna chatinoona chine hukuru sehwaMwari. Zvinhu zvese zvinooneka nekubatika zvine miganhu nemwero wazvo. Mwari haana miganhu nemwero sezvo achigara pamusoro pezvisikwa zvake. Isu tine miganhu sezvo tichigara mukati menguva. Izvi zvinoita kuti tisazive ramagwana redu. Mwari anogara kunze kwenguva ndicho chikonzero nei achikwanisa kutiudza zvichauya kupfurikidza Bhaibheri.
ISAYA 13:19 Zvino Babironi, rine mbiri paushe hwose, raizvikudza vaKaradhea pamusoro pekunaka kwaro, richaita sepanguva yakaparadza Mwari Sodoma neGomora.
20 Haringatongogarwi nevanhu, hakuna vangatongogaramo kusvikira kumarudzi namarudzi; kunyange nomuArabia haangatongodziki tende rakemo, navafudzi havangavatisi mapoka avo.
Aya mashoko akaoma. Babironi guta guru repasi rose, richaparadzwa uye haringazovakwi patsva. Alexander Mukuru, mukuru wemauto akachenjera pasi rose, akasarudza kuita Babironi guta guru rehushe hwake hwepasi rose. Akasarudza Babironi kuti ariite guta guru asi akabva afa zvisinganzwisisiki pashure pekudaro. Varume vashanu vaive naye paakafa vakazonyora pamusoro pechiitiko ichi pashure. Mumwe nemumwe akataura nyaya yakasiyana neyemumwe. Saka chokwadi chaicho pamusoro pekufa kwake achiri mudiki pazera remakore 32, chakaramba chisina kujeka. Isaya akanga atuka Babironi. Alexander akaedza kusimudzira guta iri. Pashure perufu rwaAlexander, Babironi rakava matongo rikasiiwa rakadaro kwemakore kusvikira Saddam Hussein, mutungamiri weIraq, asarudza kuvaka patsva matongo aya. Pakumhura kwake chiporofita ichi, nehumbwende akatsamwisa America nevayaidyidzana nayo vakamupwanya nekuita kukuru kwehondo yetekinoroji yepamusoro-soro. Zvisinei kuti chikonzero chavo chehondo yeGulf chaive chii , Mwari akashandisa hukuru hweAmerica munezvehondo kuti pave nechokwadi chekuti Saddam afe kuitira kuti Babironi irambe iri matongo. Muporofita Isaya aive ataura. Alexander naSaddam vaifanira kuteerera.
JEREMIA 51:1 Zvanzi naJEHOVA; tarirai, ndichamutsira Babironi, nevagere Rebi-kamai mhepo inoparadza.
Mhepo chiratidzo chehondo.
Kurwiswa kwakaitwa Iraq neAmerica kwakadaidzwa kuti “Mhepo yegwenga” (Desert Storm) . Parizvino hapasati pane ari kuedza kuvaka Babironi zvakare. Kubva pamaonero aMwari, kurwisa uku kwaive kuri pamusoro peBabironi, iyo yaive yave kuvakwa patsva.
Mwari anotonga ari kunze kwenguva uye kunze kwenzvimbo dzepakadzika dzika. Anoziva zvichauya.
MAPISAREMA 113:6 Iye unozvidukupisa kuti avone zviri kudenga, napasi!
Saka huronga hwaMwari hukuru hwaive hwekuzvideredza kuti auye pahwaro hwedu isu vanhu.
Mwari anoda kuti timunamate. “Mwari” zvinoreva uyo watinonamata.
Saka Mwari akasika nzvimbo yezveMweya inova denga achibva asika (vatumwa) ngirozi, dzine miviri yeMweya, kuti dzigare mudenga.
VAHEBERU 1:6 Vuye, kana achizovuyisa zve dangwe rake panyika, unoti: Vatumwa vose vaMwari ngavamunamate.
ISAYA 6:2 Kumusoro kwake kwakange kumire sarafimi; imwe neimwe yakanga ina mapapiro matanhatu; namaviri yakanga yakafukidza chiso chayo, namaviri yakafukidza makumbo ayo, namaviri yakanga ichibhururuka nawo.
3 Imwe yakadanidzira kuneimwe, ichiti: Mutsvene, mutsvene, mutsvene iye JEHOVA wehondo; nyika yese izere nekubwinya kwake.
4 Nheyo dzezvikumbaridzo, dzikazununguka nezwi rewakanga achidana, imba ikazadzwa novutsi.
1 VAKORINTE 15:40 Kune miviri yekudenga, nemiviri yenyika; asi kubwinya kweyokudenga ndokumwe, nokwenyika ndokumwe.
Pakutanga Mwari akasika denga, nzvimbo yezveMweya.
GENESISI 1:1 Pakutanga Mwari akasika denga nenyika.
Akabva asika ngirozi kuti dzimunamate mudenga. Asi ngirozi hadzaikwanisa kunamata munhu wadzaisakwanisa kuona. Saka akazviitira muviri wemweya “akazviisa” mauri kuitira kuti agare pachigaro cheushe ari mauri. Ngirozi hadzaikwanisa kuona Mweya waMwari waive mukati memuviri weMweya uyu. Vaikwanisa kuona muviri wekudenga (muviri weMweya) uyo waigara Mwari.
1 VAKORINTE 15:44 Unodyarwa uri muviri wokuberekwa, unomutswa uri muviri womweya. Muviri wokubereka uripo, nomuviri womweya uripo.
Mwari akabva azosarudza kuita nyika yaaizozadza nevanhu vaizomunamata.
ISAYA 66:23 Zvino panguva iyo vanhu vose vachauya kuzonamata pamberi pangu, pakugara kwomwedzi mumwe nomumwe, napasabata imwe neimwe ndizvo zvinotaura JEHOVA.
JOHANE 4:23 Asi nguva inouya, nazvino yatovapo, yokuti vashumiri vazvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi; nokuti Baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata.
Hurongwa hwaMwari hwekutanga hwaive hwekuzviratidza kupfurikidza pakurarama mumuviri wemweya wakaita segore kana shongwe yemoto muTestamente yekare. Hurongwa hwake hwechipiri, muTestamente Itsva, hwaive hwekuzviratidza nekugara mumuviri wemunhu waakadaidza kuti Jesu.
1 VAKORINTE 15:50 Zvino, hama dzangu, ndinoreva ndichiti, nyama neropa hazvingagare nhaka youshe hwaMwari; nokuvora hakungagare nhaka yokusavora.
Kana tikange tichiri neropa mutsinga dzedu, hatingapindi munzvimbo yemweya yekudenga.
Saka ropa rakatakura chakavanzika chehupenyu uye chakavanzika chechivi chekutanga. Ndicho chikonzero nei Mwari achida ropa kuripira zvivi. Ropa rinoisa mukaha unotipatsanura isu tiri panyika tinoonekwa neavo vari munyika yemweya yekudenga.
Mwari, Mweya usingaonekwi, anogara kudenga muMuviri weMweya waakazvisikira.
Muviri weMweya uyu unoonekwa nengirozi, asi hadzikwanisi kuona Mweya unogara mukati meMuviri weMweya uyu.
Mwari chaiye ndiwo Mweya ugere muMuviri uyu unoshandisa muviri uyu.
Mweya uyu ndiwo Mwari Baba.
Muviri unogara Baba ndiwo unonzi “Mwanakomana”.
Asi pane chimwe chakavanzika pamusoro paMwari chakakura kupinda denga nengirozi.
Mwari mweya unoshamisa watisingagoni kutsanangura asi ane hunhu hwevanhu zvakare.
Mwari aida kurarama mumuviri wemunhu ozviratidza panyika semunhu.
Hunhu hwevanhu uhu hwaisaonekwa zvakanyanya muTestamente yekare apo Mwari aigara kudenga (kana aizviratidza) muMuviri weMweya.
Asi Mwari Baba, Mweya usingaonekwe, Aida kuzviratidza ari mukati memuviri wemunhu. Mutumbi wekunze uyu waive muviri wemunhu wainzi Mwanakomana waMwari.
Mwanakomana waMwari anongova mutumbi wemuviri wemunhu.
Mweya mutsvene unoshamisa waive wakavigwa mumutumbi weMunhu anorarama uye muviri, Murume Jesu. Saka chikamu chaMwari chakaita munhu chainzi Mwanakomana waMwari.
Bhaibheri rinotaura nezve “Mwanakomana waMwari” asi harina kubvira rati “Mwari Mwanakomana”.
Mwanakomana ndiye aive munhu pahuMwari. Baba ndivo vaive Mweya mutsvene waive ugere mumunhu.
Saka muTestamente yekare maJuda aiziva nezveMweya mutsvene waMwari asi havana kuzoziva kuti paivewo nehunhu hwevanhu hwaive munaMwari, hwaive hwakavigwa kana kuputirwa mukati meMweya mutsvene watisingagoni kutsanangura uyu.
Satani anogutsikana kugara mumhuka izvo zvakaratidzwa nemweya yakaipa, yainzi Rigiyoni, iyo yakadzingwa kubva mumunhu ikanopinda muboka renguruve. Nekuzadzwa newakaipa, nguruve idzi dzakamhanyira kunozviuraya kupfurikidza kuzvinyudza mugungwa.
Zvisinei Mwari anoda kugara mumoyo yevarume nevakadzi vakazvarwa patsva.
Mwari akasika vanhu nehunyanzvi hwese uye nemoyo wake wose kuitira kuti agogara mavari.
Saka Jesu Munhu (Mwanakomana waMwari) uyezve semunhu ndiMwari nekuti kuzara kwehuMwari kunogara maari, saka ndiye Mwari.
Uri muviri wemunhu uyezve une mweya usingaonekwi kana kuti hupenyu hunorarama mukati memuviri wako. Mweya uri mauri ndiwo uri kutonga (baba) muviri wako ndiwo uri kutongwa (“mwanakomana”).
Chinangwa chikuru chekurarama kwemunhu ndechekuwana Mweya waMwari kuti ugare maari kuitira kuti munhu ave akazviwisira kuhurongwa hwaMwari.
Kune zvinorema zvizhinji zvatinofanira kutarisa kana tichidzidza chidzidzo chekuzara kwovuMwari. Aya angori mavambo.